Fitsinjarana natao ho Firewall | Avy amin'ny Linux
Fitsinjarana natao ho Firewall
Isika izay tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny GNU / Linux ary Rindrambaiko Maimaimpoana, zatra mahafantatra fizarana hafa isanandro izahay, mifantoka amin'ny zavatra tena samihafa.
Androany aho mitondra ohatra kely aminao. Eny, misy fizarana (maro) mifototra na mifantoka amin'ny FireWall na Firewall. Fa aloha ... Inona ny afobe atao firewall?
Raha ny filazan'i SAN Wikipedia.
Un Firewall (Firewall amin'ny teny anglisy) dia ampahany amin'ny rafitra na tamba-jotra izay natao hanakanana ny fidirana tsy nahazoana alalana, na dia mamela alalana fifandraisana aza.
Izy io dia fitaovana na andiana fitaovana namboarina mba hamela, hametra, hanafaka, hanafaka, ny fifamoivoizana eo anelanelan'ny sehatra samihafa mifototra amin'ny fitsipiky ny fitsipika sy ny masontsivana hafa.
Amin'ny ankapobeny firewall, satria matetika no aseho. Izy io dia rindrina manapaka na manakana ny fidirana, izy io dia mety ho avy amin'ny fidirana (Avy amin'ny Internet ka hatrany amintsika) Na ny mifanohitra amin'izay ... Avy ao anatiny ka hatrany ivelany.
Amin'ny ankapobeny dia napetraka ao amin'ny faritry ny DMZ (faritra demilitarized) ny afomanga. Ity faritra ity dia toerana tsy anazaran'ny router ny alàlan'ny firewall anatiny (izay tsy dia be loatra). Amin'ity fomba ity dia voamarina amin'ny mpizara anay ny fifamoivoizana rehetra.
Tokony hazavaina ihany koa fa ny fizarana rehetra dia azo ampiasaina ho Firewall na Router. Misy ihany ny sasany izay efa "Vonona" na namboarina. Miaraka amin'ny zavatra toy ny NID (Intrusion Detection System) sns.
Ny tsirairay amin'ireo fizarana ireo dia samy manana ny PRO sy ny CONS.
Na dia maro aza, dia hanome anarana vitsivitsy izahay ary inona ny safidy azonao.
2 Firafitra Endian
Antsoina hoe ClarkConnect taloha, io fizarana io dia miorina amin'ny Satroka mena / CentOS, dia vahaolana feno ho an'ireo orinasa manolotra:
Rafitra fikarohana an-tsokosoko SNORT
Tambajotra tsy miankina virtoaly (PPPT, IPSec, OpenVpn)
Proxy misy sivana atiny (Kalamara, DansGuardian)
serivisy mailaka (Webmail, Fanamboarana, SMTP, POP3/ s, IMAP/ s)
Database sy Web Server (jiro)
Serivisy fisoratana sy serivisy fanontana (Samba ary kaopy)
Flexshares (fitehirizana natambatra multiprotocol mampiasa CIFS, HTTP/ S, FTP/ S, ary SMTP)
MultiWAN (Famolavolana Internet mandefitra diso)
Tatitra momba ny antontan'isa momba ny rafitra sy serivisy (MRTG sy ny hafa)
Izy io dia fizarana GNU / Linux hampiasaina ho Router / Firewall, izay mandeha ary novonoina avy amin'ny Live-CD, izay ahafahany mihazakazaka amin'ny PC taloha. Tsy mampiasa sehatr'asa an-tsary izy io, ao anatin'izany ny DNS, Web, FTP, serivisy SMTP, fitaovana toa an'i Mysql, Wget ary Lynx, ary ireo fitaovana fiarovana toy ny OpenVPN sy Shorewall. Linux Avy amin'ny Scratch(Linux avy hatrany am-boalohany) rafitra fananganana fizarana Linux mamela ny mpampiasa hamorona kinova manokana.
Fitsinjarana izany GNU / Linux Loharano misokatra manokana amin'ny Routing / Firewalling, novolavolain'i Italian Endian Srl sy ny fiarahamonina Endian. Miorina amin'ny IpCop am-boalohany ny fizarana hafa izay kosa dia fork an'ny SmoothWall.
Ny Version 2.2 dia misy:
Firewall (Làlana roa tonta)
Virtual Private Network (VPN) Gateway amin'ny OpenVPN o IPsec
Antivirus amin'ny mailaka
Proxy HTTP mangarahara
Hotspot / Wireless
Fanohanana SIP VoIP
Fandikana adiresy tambajotra
Adiresy IP maro (solonanarana)
Fifanarahana tranonkala HTTPS
Antontan'isa momba ny fifandraisana
Fanaterana hazo any amin'ny mpizara ivelany
IDS (Sistema momba ny fidirana an-tsokosoko)
Fanohanana Modem ADSL
Fizarana GNU / Linux mandeha io BusyBox hanomezana firewall / router amin'ny disk floppy bootable.
Floppyfw dia tohanan'ny Thomas lundquist, eo ambany fivoarana tsy tapaka. Ny kinova ankehitriny dia 3.0.12
Intel 80386SX processeur na tsara kokoa
Karatra tambajotra roa
Kapila mangirana 1.44 MB
Izany dia ahitana ny:
Lisitra fanaraha-maso fidirana
ip-masquerading (fandikana adiresy tambajotra)
rafitra fonosana tsotra, ampiasain'ny mpampanonta, VPN, fifamoivoizana
Fandraisana an-tanana amin'ny alàlan'ny klogd / syslogd eo an-toerana sy lavitra
Fanohanana serial seranana amin'ny alàlan'ny console
Mpizara DHCP sy cache DNS ho an'ny tambajotra anatiny
Ny ankamaroan'ireo fizarana ireo dia azo apetraka ihany koa amin'ny karazana router.
Ny be mpampiasa indrindra apetraka amin'ny router dia
Izy io dia fizarana GNU / Linux hita amin'ny router sy ny fitaovana tafiditra. Izy io dia misy andiana fonosana rindrambaiko 2000 eo ho eo izay napetraka sy nesorina tao ambanin'ny rafitra fitantanana fonosana opkg. OpenWrt Izy io dia azo alamina amin'ny alàlan'ny interface interface commande BusyBox ash, na ny interface web LuCI.
Operwrt dia afaka mihazakazaka amin'ny router CPE, vavahady fonenana, smartphone, solosaina paosy na PDA ary solosaina finday kely toa ny OLPC, fa azo atao ihany koa ny mandeha amin'ny solo-sainan'ny x86 mahazatra. Ny tetikasa dia mampiditra wiki, forum, SVN Source Version Control, ary Trac ho an'ny fitantanana ny tetikasa, ny fanitsiana bibikely ary ny fivelarana kaody. Fanampiana ara-teknika fanampiny no omena amin'ny alàlan'ny IRC.
Ny hafa ... * m0n0wall
Hofaranako amin'ny filazako fa tsy hoe satria mametraka ny iray amin'ireo fizarana ireo ianao, ny tambajotrao no ho azo antoka indrindra eto an-tany. Miankina amin'ny fampiasana, ny fikirakirana ary ny fikojakojana omenao ny rafitra iray manontolo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fitsinjarana natao ho Firewall
Willian dia hoy izy:
OpenWRT dia tafiditra ao anaty linux, matetika no hita bebe kokoa toy ny firmware izy io noho ny OS, na dia mbola linux aza izy io, izay fototr'ity lahatsoratra ity.
Manoro hevitra anao ihany koa aho hijery etsy ambony, farafaharatsiny ireto roa ireto:
- Astaro Security Linux (an'ny SOPHOS ankehitriny, ireo antivirus, hitako nitady ny URL hametrahana azy eto) http://www.astaro.com/blog/up2date/astaro-security-linux-20
- Vyatta Core http://www.vyatta.org/
- PfSense koa tena tsara, fa araka ny efa voalaza dia miorina amin'ny BSD
Valiny ho an'ny Willians
skuarch dia hoy izy:
tsy manana post of fizarana linux hanao router ve ianao ??? milay izany
Mamaly an'i skuarch
Ilay ampiasain'izy ireo amin'ny asako dia pfsense, saingy distro BSD izy io
Eny, novakiako koa tao. Namaky momba azy tsara aho.
Creeping_death dia hoy izy:
Ny tsara indrindra dia ny pfsense, na dia tsy mifototra amin'ny linux aza, fa kosa amin'ny BSD. Ity FW ity koa dia mampifandanja, PF, sns. Tena mokstro izy raha ny amin'ny filaminana
Valiny amin'ny Creeping_death
hairosv dia hoy izy:
Mampiasa Utangle amin'ny asako aho, mora ary manana kinova Lite maimaim-poana koa izy ireo izay mihoatra ny super ampy ho an'ireo PC 100 izay ananako amin'ireo sampana 3 izay tantiko.
Mamaly an'i hairosv
Tsy fantatro fa be dia be ny distro ao Firewall amin'ny linux
Mastiff dia hoy izy:
Ny iray hafa izay mandeha tsara dia BrazilFw.
Valiny tamin'i Mastin
faustod dia hoy izy:
Manana toe-javatra iray aho ary ity no manaraka, hijerena raha afaka manampy ahy ianao.
Manana mpizara squid 2.7 napetraka aho ary mandeha tsara ny zava-drehetra, tonga ny olana rehefa misy olon-kendry ao amin'ny tambajotra mametraka proxy ho an'ireo izay any ivelany amin'ny internet ary mihomehy ahy ny tarehiko.
Ankehitriny, ahoana no hataoko mba tsy ahafahan'izy ireo mampiasa ireo proxy amin'ny Internet ary tsy afaka mampiasa afa-tsy ilay avy amin'ny tambajotra anatiny.
Raisina an-tanan-droa ny fanampianao amin'ity raharaha ity.
Valiny amin'ny faustod
Miguel Mujica B dia hoy izy:
Ny PfSense no tsara indrindra, vitsivitsy, -mba-, miasa tsara, manao ny asany tsara.
Tsikaritro fa kely dia kely ny fahafantaran'izy ireo azy.
Valiny tamin'i Miguel Mujica B
Ny zavatra niainako tamin'ny router sy ny tamba-jotra Wi-Fi ahy
Jarre AeroSkull Skull mpikabary